VLC media player waa software caan ah ku dhufto desktop. Ma ogtahay in waxa laga heli karaa adiga oo taleefan Android sidoo kale? Iyada oo sii kordhaya isticmaalka casriga ah, VLC hadda bixisaa ay ciyaaryahan warbaahinta caanka ah ee Android. Haddii aanad garanayn software halkan shan wax waa in aad ogaato oo ku saabsan VLC u android.
Qeybta 1: Shan ilo lagu kalsoonaan karo download
Qeybta 2: Sida loo dar subtitles in android VLC?
Qeybta 3: ciyaaryahan warbaahinta caanka ah VLC dhawaan taageeri doonaa Chromecast
Qeybta 4: Sida loo Calan playlist ah ee VLC android
Qeybta 5: sida loo isticmaalo VLC u Android TV
VLC mid ka mid ah barnaamijyadooda aadka u soo bixi on android waa laga heli karaa website-yada kala duwan iyo suuqyada haddii aad rabto in aad kala soo bixi app. Halkan waxa ku jira shan isha lagu kalsoonaan karo oo VLC.
Si kastaba ha ahaatee, dhammaan ilaha aad qaadan doonaa Google Play u download iyo rakibidda.
Haddii aad u jecel socda VLC in desktops, malaha aad loo isticmaalo in lagu isticmaalayo subtitles. VLC, sida version desktop ay, taageertaa subtitles ee telefoonada Android sidoo. Waxaad ku dari kartaa subtitles fudayd. Waxa kaliya ee loo baahan yahay waa faylka Cinwaan habboon. Marka aad u ciyaareyso video ka jaftaa kaliya icon labaad oo siinaysaa aad Dooro file Cinwaan. Browse iyada oo aad telefoon u file Cinwaan oo waxaa lagu dari doonaa video ah. Si kastaba ha ahaatee, hadduu durba gundhig u noqon doona si toos ah. ogaan VLC ah. Waxaad had iyo jeer ka bedeli kartaa qoraalka Cinwaan ka goobaha.
VLC ayaa ku dhawaaqday in ay ku dari doonaa Chromecast in ay update soo socda. Chromecast waxaa si tartiib tartiib ah uu noqday mid ka mid ah hal-abuurka ugu weyn. Chromecast bedelaa qaabka aan u daawado telefishanka sida ay isku xira naga casriga ah iyo qalabka kale ee network. Waxaad hadda qulquli karaan audio iyo video si toos ah uga app in aad TV . Chromecast u ogolaanaya ciyaaro videos ka Netflix iyo YouTube laakiin ma fududa in la sii qulquli videos in ay yihiin qalabka. Hadda Chromecast ogolaan doonaa hoorto videos iyo Cajalado isticmaalaya VLC.
Qeybta 4: Sida loo Calan playlist ah ee android VLC
Marka songs waxaa lagu ciyaari doonaa android VLC waxaad badbaadin kartaa playlist la magac aad jeceshahay playlists, kuwaas oo diyaar u ah in aad si ay u helaan ka qaybaha playlist. Waxaad had iyo jeer ka bedel kartaa playlist by heeso gacanta ka saareen iyo sidoo kale beddesho saf ahaayeen, oo keliya iyaga, waxayna jiidayeen kor iyo hoos. Waxa kale oo aad tirtiri kartaa ama maareeyaan, sida aad jeceshahay aad telefoon.
Haddii aad rabto in aad u aragto video ku saabsan tv android leh ee shabakadda. Waxaad mar walba sii qulquli karaan oo ka gelaya cinwaankaaga shabakada. Just taaban dhinaca bidixda ah ee kore. Waxaa jiri doona fursado dhowr ah oo ay ka mid il. Just ka jaftaa ku il iyo qor ciwaanka ka mid ah qalabka ee shabakadda. In dhowr daqiiqo, waxaad noqon doontaa si aad u daawato webigu ku awood.
> Resource > Android > Shan Waxyaabaha aad Ogaato VLC ee Android Player